Ampidino Opera ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (70.40 MB)
Opera dia mpizaha tranonkala iray hafa izay mikendry ny hanome ny mpampiasa traikefa aminny Internet haingana sy mandroso indrindra aminny motera nohavaozina, ny interface interface ary ny endriny.
Ny fanamafisana ny fotodrafitrasa miaraka amini Chromium sy Blink hitazomana ny toerany eo aminireo mpitety tranonkala malaza indrindra, Opera dia manana fiasa izay afaka mihantsy ani Chrome, Firefox ary Internet Explorer eo aminny tsenanny mpitety tranonkala.
Rehefa mametraka sy mihazakazaka Opera aminny solo-sainao voalohany ianao dia afaka mahatsikaritra mivantana ny fanovana, ary misy fiasa vaovao miandry anay raha vantany vao manokatra ny tranokalanay ianao. 3 takelaka samihafa antsoina hoe Quick Access, Dashboard ary Discover no natao hanatsarana ny traikefanny mpampiasa Internet.
Noho ny menio Quick Access dia azontsika atao ny manasokajy ireo tranonkala vangiantsika matetika indrindra araka ny fanirianay, ary miditra aminireo tranokala ireo aminny tsindry tokana isaky ny maniry.
Noho ny takelaka iray hafa antsoina hoe Dashboard, afaka miditra aminireo tranonkala tadiavintsika isika, mankafy na te-hijery indray avy eo, ary miditra aminizy ireo isaky ny maniry ato aminity fizarana ity isika.
Ary farany, noho ny Browse, vakizoro iray hafa izay nihaona taminny mpampiasa tato ho ato, afaka miditra aminny vaovao farany navoakanny tranonkala malaza eranizao tontolo izao izahay, ao anatinny sokajy samihafa azonay sivana. Ny fahafaha-manivana na aminny sokajy na avy aminny firenena dia atolotra ny mpampiasa aminizao fotoana izao.
Fanavaozana miavaka iray hafa koa ny fidirana aminny kaontinao Opera dia hahafahantsika mampifandray na aminny desktop na aminny finday. Aminizany no ahafahantsika manohy ny asa ataontsika aminny fitaovantsika finday mandritra ny dia, avy aminny toerana nijanonantsika rehefa tonga tany aminny solosaina isika.
Ankoatrireo fiasa vaovao rehetra ireo, ny Opera, izay misy ny fanohananny lohahevitra, ny plug-in support ary ny endri-javatra mahazatra rehetra aminny mpitety hafa dia toa nampiakatra kely ny bara.
Ho fanampinizany, noho ny Turbo Mode -ny, Opera, izay manafaingana ny fitetezana anao aminny Internet, dia be pitsiny ihany koa momba ny fikirakirana sy ny fampiasana fitadidiana.
Fanohanana aminny tab
tena haingana be
Ambany ny fanampiana fanampiny
Haben'ny rakitra: 70.40 MB